Home ASIAN STARS Arda Turan Child Story Plus Ihe omuma ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; 'El Turco'. Anyị Arda Turan Childhood akụkọ na-enweghị isi Biography eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo ụbọchị. Ihe omumu ya bu ihe omuma ya tupu ama aha ya, ndu ezinulo ya na otutu ndi mmadu. Enweghị n'ihu adieu, ka amalite.
Arda Turan Child Story Plus Ebube Ihe Ntughari Eziokwu -Oge mmalite
Arda Turan nke a mụrụ na 30 January 1987 na Istanbul, Turkey na Mr Adnan Turan (Nna) na Yuksel Turan. Ọ tolitere n'enweghị profaịlụ ma ọ dịghị ama ihe ọ ga - abụ ma ọ bụ ihe ga - abịa n'ọdịnihu.
Ihe ndekọ akuko Arda abụghị ihe atụ. Mgbe ọ dị afọ iri na ụma, ọ na-agba ọsọ n'ụlọ akwụkwọ, a na-ahụkarị ya mgbe ọ na-aga eleta onyeisi ụlọ akwụkwọ. Ọ bụ okwu nchịkwa ndị a mere ka ọ kpebie ịga akwụkwọ abụghị ọkpụkpọ ya. N'oge a, football ghọrọ nanị ihe ọ ga-eche.
Nne na nna ya nakweere mkpebi Arda maka ịga football. Ha mere ọsọ ọsọ na mkpebi ya site na ịdenye aha ya ozugbo na kọntaktị football football na Istanbul.
Ndị mụrụ ya maara na nghọta nwa ha bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa ha ga-amụta dịka ezigbo nne na nna.
Ha nyere aka ma dị irè iji duzie Arda ka ọ na-etolite. Arda na oge mepụtara ụdị àgwà pụrụ iche nke na-egosi football ma nọgide na-agbanwe agbanwe na ndụ ya ruo n'oge.
Ka nkà ya mepụtara, nne na nna ya bịara na-akwado ya. Ụzọ kachasị mma isi mee ka obi dị ya ụtọ bụ ịpụ ya maka ịzụ ahịa. Ha ga-azụta ya ihe ọ bụla ọ chọrọ. Ha chebere ya pụọ ​​n'ihe ọ bụla nwere ike igbochi nrọ ya. O doro anya, ha na-ele ya anya ụra, na-eri ma na-egwu egwuregwu dị egwu.
Arda Turan Child Story Plus Ebube Ihe Ntughari Eziokwu -Ndụ Ezinụlọ
Nna: Mr Adnan Turan bụ nwoke na-eme udo na-enwe ezigbo obi ụtọ na azụmahịa ya na mpaghara ahịa Bayrampaşa nke Istanbul.
A na echeta ya mgbe nile maka ọrụ nkwado ọ nyere nwa ya na ụzọ ọrụ ya. N'adịghị ka nwunye ya bụ Yuksel, ọ dịghị etinye aka n'ihe omume nwa ya.
Nne: Yuksel bụ nne Arda. Ọ na-ekwu okwu nke ọma bụ onye a maara nke ọma maka ichedo nwa ya n'etiti esemokwu.
Ọ dị ngwa iji kpuchido nwa ya n'oge ọfụma ụgbọelu mba ahụ ebe nwa ya nwoke bụ Arda wakporo onye nta akụkọ Turkl, Bilal Meşe.
Dị ka Yürksel Turansaid si kwuo, "Mwakpo nke nwa m nwoke amalitela '.
Nne Arda Turan, Yüksel Turan, kwuru, sị, "Arda bụ ezigbo onye ma bụrụ onye na-achọghị ịkụda onye ọ bụla, ọ ga - enweta ihe ịga nke ọma na ọ nweghị ndị na - agba ọsọ nwere ike ịbanye na mba a, ọ na - akwụ ụgwọ ugbu a ... Ha na - agbalị imecha nwa m na - ! Edeela m ihe mere nwa m ji dee na o siri ike ịghara ịzaghachi ha. " Na-enye ohere maka okwu.
Nwanna: Okan Turan Arda nke okenye nwanne.
Okan natara akwukwo di elu (BSc) site na Istanbul Technical University, Aeronautical and Astronautical Engineering Faculty in 1989 and Master's degree (MSc) site na Istanbul Technical University, Ngalaba nke Management, Management Engineering na 1992. Okan malitere oru oru ya n'ubi nke ndi isi ahia di ka onye nyocha ego na Data Securities Co. na 1992 wee jee ozi dika Chief Financial Analyst ruo n'oge.
Arda Turan Child Story Plus Ebube Ihe Ntughari Eziokwu -Ndụ mmekọrịta
Miranda Shelia na Arda Turan anọwo na-akpakọrịta kemgbe Dec 2016. Onye Georgian bụ nwa agbọghọ na-adịbeghị anya dị ka ọ na-ede oge.
Asylian Dogan (ọhụụ n'okpuru) bụ nwanyị mbụ nke Arda Turan. A mụrụ ya na 4th Disemba, 1985 ma na-asụ ma Bekee ma Turkish. Aslian na Arda malitere na 2014 wee gwụ na December 2016. Ha abụọ dị nso.
Dị ka Aslian, Arda Turan nweela mmekọrịta ndị ọzọ na 5 ruo ọtụtụ afọ. Arda Turan mmekọrịta ndụ na nchịkọta gụnyere aha 6. (1) Dilara Oztunç (Dated from 2007 - 2008), (2) Sinem Kobal (Dated from 2012 - 2013) (3) Selin Imer (Dated in 2012) (4) Idil Firat (Dated in 2013) (5) Aslihan Dogan (DN na 2014) (6) Miranda Shelia (2017).
Arda Turan Child Story Plus Ebube Ihe Ntughari Eziokwu -Ọ na-eche na ọ bụ Star Star
N'ime oge ezumike nke La Liga, Turan kpebiri ịgbalị ime ya dị ka kpakpando. Ọ laa n'ụlọ Turkey ka ọ bụrụ abụ 'Voice'. Ọ na-abụ abụ a na-akpọ 'Sari Cizmeli Mehmet Aga' - egwu egwu Turkish nke a ma ama, ka anyị kwuo na ọ ghaghị ịrapara na bọlbụ. Ndị ọkàikpe ka na-agbanye oche ha gburugburu iji chọpụta onye onye ọbịa pụrụ iche.
Arda Turan Child Story Plus Ejighị Ezi Ihe Akụkọ Eziokwu-Idolizing Michael Jordan na Roger Federer
A na-ele midfielder gụrụ anya anya dịka akara ngosi nke ọtụtụ karịsịa na Turkey. Ma, Arda Turan nwere akara ngosi nke egwuregwu ndị ọzọ. Egwuregwu Tenley Roger Federer na basketball icon Michael Jordan bụ ndị na-eme egwuregwu ọ na-ele anya.
N'ajụjụ ọnụ, o kwuru, sị, "M na-agbalịsi ike imeziwanye ihe, ndị egwuregwu na ndị inyom kasị mma na-agbalịsi ike ka mma. Ọ bụ ya mere Michael Jordan na Federer bụ akara ngosi m. "
A maara akụkọ abụọ ndị a ọ bụghị nanị maka nkà ha na ike ha n'ọhịa kamakwa amara ha na ụdị mmadụ ha. Ndị ha na ya na-akpakọrịta na Turan na-ekwukarị ya dịka onye nwere obiọma na onye dị mma nke na-eche banyere ihe ndị ọ na-ekwere.
Arda Turan Child Story Plus Ejighị Ezi Ihe Akụkọ Eziokwu-Ịhụnanya maka ụgbọala
Dị ka Turkish Press, Turan nwerebu Aston Martin DB9 na Mercedes-Benz SLS AMG.
O nwere agụụ maka ụgbọala na ugbu a na-arụ ọrụ Audi RS6. Na Jenụwarị 2009, o tinyere aka na mberede ụgbọ ala Istanbul. N'ụzọ dị mma, Turan enweghi mmerụ dị njọ ma nọgide na-enye ọzụzụ nanị na ọkpụkpụ na ọnyá.
Arda Turan Child Story Plus Ejighị Ezi Ihe Akụkọ Eziokwu-Okwu iwe
Na 16 November 2008, Turan dara n'oge egwuregwu megide İstanbul BB.
Mgbe a gbasịrị ya n'ụlọ ọgwụ, a chọpụtara na ya nwere ọrịa arrhythmia. Ụbọchị mgbe ihe ahụ gasịrị, ndị dọkịta kwupụtara na Turan dị ezigbo ahụ ike nakwa na oké ike ọgwụgwụ kpatara arrhythmia. Na November 2009, ọ na - ata ahụhụ obere fatịlaịza ma nataghachi n'ime ụbọchị ole na ole iji maliteghachi ọzụzụ.
Ọbụna n'oge na-adịbeghị anya, Turk maara nke ọma na mmerụ. Ụbọchị ndị a, ya ma ọ bụ ikpere ma ọ bụ hamstring. N'ezie, mgbe ọ merụrụ onwe ya na egwuregwu megide ndị ọrụ ya ugbu a, ọ hapụrụ ala ahụ na anya mmiri.
N'agbanyeghị mmerụ ahụ ya, a maara ya ịbụ onye agha. Ọtụtụ mgbe a na-atụle ya na egwuregwu nke egwuregwu na-adịghị ekwu na-anwụ anwụ àgwà. Ụdị nke na-adịghị mfe ịbịa ma ọ bara uru maka ndị na-agba ụkwụ.
Arda Turan Child Story Plus Ejighị Ezi Ihe Akụkọ Eziokwu-Nsigharị na Leonidas
The Uncanny Resemblance n'etiti Onye na-eme ihe nkiri, Gerard Butler AKA Leonidas nke 300 na Arda Turan esetịla ịntanetị na oké ifufe. Ihe ndi mmadu nile choro bu odidi nke Arda nke odida ubi ebe ndi Leonidas kwadoro nke oma.
Arda Turan Child Story Plus Ebube Ihe Ntughari Eziokwu -Na-arọ nrọ maka Liverpool
A na-amarakarị ndị na-egwu egwu olu ha maka otu ụlọ ọrụ. Ụfọdụ nwere ezigbo ego nke na-egwuri egwu maka akụkụ ha n'akụkụ ụfọdụ.
Arda Turan so n'òtù ikpeazụ. Laa na Euro 2008, Andrey Arshavin kwupụtara ịhụnanya ya maka FC Barcelona. N'ụzọ dị mwute, ọ bụghị mgbe niile ka ọ na-aga n'ihu. Na 2011, Turan, mgbe ahụ na-egwu maka Galatasaray kwukwara ịhụnanya ya maka ndị gọọmenti England. O kwuru, sị: "Dị ka m na-ekwukarị, Liverpool na-adọta m n'ihi ọdịnala ha.
"Na Europe, m bụ onye na-akwado ndị Liverpool, n'ihi ya, ọ bụrụ na m gaa kpọọ egwuregwu na Europe, m ga-egwu egwu maka ha."
O kwuru na ọ bụ nrọ ya na-egwu maka Reds nke Merseyside. Otú ọ dị, Liverpool adịghị mgbe ọ bịara kpọọ. Atletico Madrid mere na soro ya na Diego Simeone na okpu agha nke mere ka ha gaa n'aha La Liga na Njikọ Njikọ n'ikpeazụ ọ kwagara Camp Nou. Ihe yiri ka ọ ga-abụ na Liverpool ga-anwụrịrị, ọ ga-abụrịrị uru ọ bara.
Arda Turan Child Story Plus Ebube Ihe Ntughari Eziokwu -Ozugbo Oke bu buut na onye ogbugba
Ọ bụ ezie na ọ bụ ezi ihe nlereanya na ọrụ ndị ọ na-eme na pitch ahụ, o doro anya na Turan nwere iwe dị ukwuu n'oge na-adịbeghị anya, na-atụba akpụkpọ ụkwụ ya na Atletico si Copa del Rey merie Barcelona n'oge gara aga.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ gaghị abụ onye ọkpụkpọ kachasị ikpeazụ ka ọ kwụsị isi ya.
Arda Turan Child Story Plus Ebube Ihe Ntughari Eziokwu -Nwoke Nwere Ezi Obi
A maara Arda ka ọ nwee obi ọlaedo. N'oge na-adịbeghị anya, o sonyere egwuregwu egwuregwu na Egypt iji nweta ego maka ụmụ mgbei na mba Arab. N'afọ gara aga, ọ na-egwuri egwuregwu egwuregwu na ụlọ ya (Izmir Ataturk Stadium) iji zụlite ego maka ezinụlọ ndị òtù Soma.
A maara ya karịsịa maka inyere ụmụaka aka na-arịa ọrịa aka. Na May, 2014, a họpụtara ya Onye Nlechite anya Ọmịiko maka Khojalay Massacre nke na-akọ banyere igbu ndị mmadụ bi na 161 agbụrụ Azerbaijani. Ihe omume ya na-agụnye ịmalite ịmara na ịkwalite udo ụwa.
Ọ bụkwa nwoke ezinụlọ. Na ụgwọ mbụ ya, ọ zụrụ ụlọ maka nne na nna ya ma zụrụ nwanne ya nwoke ụgbọ ala, ọ bụghị nanị ụgbọ ala, Porsche.
Arda Turan Child Story Plus Ebube Ihe Ntughari Eziokwu -A Socialist
Arda Turan meghere ụlọ ya na Madrid na ndị mmadụ n'ofe obodo. A na-eji ebe a na-arụ ọrụ maka arụmụka na mkparịta ụka. Turan n'onwe ya bụ onye na-elekọta mmadụ ma mara na ọ na-emeso onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ ahụ n'otu ụzọ ahụ n'agbanyeghị na akụ na ụba na ọrụ.
Ọ tolitere n'otu mpaghara na-arụ ọrụ na Istanbul ma jiri oge mbụ ya n'okporo ámá. Oge siri ike n'oge ọ bụ nwata na nsogbu ndị ọrụ ahụ na-eche ihu enweela mmetụta ná ndụ ya. N'ajụjụ ọnụ o kwuru, "Ana m akwado nkwado ndị ọrụ, ikike nke ndị nkịtị."
Nkwado ndọrọ ndọrọ ọchịchị siri ike ketara na Turan site n'ọgbọ. Nna ya hapụrụ echiche ya, nna nna ya bụ onye na-akwado ndọrọ ndọrọ ọchịchị aka nri.
Arda Turan Child Story Plus Ebube Ihe Ntughari Eziokwu -Ọrụ nlekota oru
Turan malitere igwu egwu na Bayrampaşa. Mgbe ọ bụ nanị 12, ọ sonyeere Galatasaray na 2000 ebe ọ kwụsịrị. O mere klas ya na Galatasaray na 2006 mgbe oge ise gara aga n'egwuregwu ntorobịa. Ọ bụghị mgbe nile ka Rosy a. Onye na-eto eto na-agba ọsọ na-agba mbọ iji merie nsogbu nke ịgba chaa chaa ọ bụla, ọ bụghị ihe ọsọsọ ọsọ na ike dị mkpa maka egwuregwu ahụ. Arda bụ onye kacha nta na nke 1987 afọ ọmụmụ, ọ gosipụtara na ya n'ememme mbụ ya. N'ịbụ ndị na-eto eto, ndị na-egwuri egwu karịa ndị na-eme egwuregwu ahụ adịghị enwe mmasị n'ebe onye ọkpụkpọ nke nwere ụdị aghụghọ nile dị, ma enweghị ọrụ.
Ọ na-eme ka ọ bụrụ onye mbụ maka ndị mba Turkey n'oge August 2006. Turan na-akpọ Turkey maka oge mbụ megide Luxembourg na egwuregwu enyi na Turkey meriri 1-0.
Na oge 2006 / 07, Turan ghọrọ otu n'ime egwuregwu kachasị mkpa nke Galatasaray. O kwuru na ya bụ Super League title na 2008. Atletico Madrid na-akpọ Spanish maka ya maka 12 nde Euro na August 2011. Na mbụ ya na Atletico Madrid, Turan meriri Europa League na UE Cup Super Cup. Ọnụ ọgụgụ Atletico 10 rụrụ ọrụ dị mkpa na mmeri mmeri nke otu ya na oge 2013 / 14. N'oge ahụ, Atletico Madrid ruru eru maka Njikọ Njikọ na nke mbụ na 40 afọ. Turkish Turkish Turan meriri ihe mgbaru ọsọ 22 ma nwee 32 na-enyere 177 aka na afọ anọ ya na Atletico Madrid. Site na ego mbufe nke 34 nde Euro, ihe ngosi ọhụrụ nke Barcelona na-aghọ onye na-egwu Turkey kachasị mkpa n'akụkọ ihe mere eme.
Arda Turan Child Story Plus Ebube Ihe Ntughari Eziokwu -Ịhọrọ onye nta akụkọ
Arda Turan lara ezumike nká site na mba mba Turkey wee bịa mgbe a kọrọ na ọ na-egbu onye nta akụkọ na otu ụgbọ elu.
E boro ya ebubo na ya na onye odeakụkọ na-ese okwu na-agba ọsọ na-eso enyi enyi megide Masedonia maka ịkọ akụkọ e mere na-ebo Turan ikpe maka ịkpata esemokwu n'etiti ndị agha na ego ego.
Dabere na Reuters, Turan kwetara na ya "mehiere" ma hapụ mba ya.
"Emere m ihe na-ezighị ezi mgbe m na-eyiri otu ndị uwe ojii. Ọ bụ ihe na-ekwesịghị ime na otu ụgbọelu mba, " o kwuru.
Dị ka akwụkwọ akụkọ Bekee si kwuo The Independent, ihe ahụ merenụ mere n'ọdụ ụgbọelu na Italy mgbe Turan kwusiri ka Bilal Meşe nke Turkish na-ebipụta Milliyet. Nke a bụ ihe Independent na-akọ na ọ bụ mgbanwe:
"Gwa m Bilal Meşe, ị nọ ebe ahụ?" Ka ọ malitere. "Ọ bụ gị na anyị mgbe ị dere banyere nsogbu ego ahụ? Kedu onye m rịọrọ maka ego? Kedu onye gwara m ka m nweta ego? Na-ekwu okwu. Bịanụ. Ònye mere ka ị dee akụkọ ndị ahụ? "N'akwụkwọ akụkọ ahụ, Turan kọrọ mkpu na Meşe, bụ onye odeakụkọ na-ede akwụkwọ akụkọ bụ onye kwutụrụ onye na-egwu ụgbọ elu Turan maka ọtụtụ n'ime ọgba aghara ndị ahụ.
A kwukwara na ọ bụ ranti Turan na-aga n'ihu tupu akụkọ ahụ ekwu na ndị agha ibe ya ga-ejide ya ka ọ jidere Meşe site na akpịrị. Arda Turan kwuru na ya enweghi obi nkoropụ nakwa na ya agakwaghị egwu Turkey. O kwesiri ikwusi na ha abua bu ezi ndi enyi dika ndi a huru na foto di n'okpuru.
Arda Turan Child Story Plus Ebube Ihe Ntughari Eziokwu -LifeBogger Ihe omuma nke ihe omuma
A na-akasị mara ya maka njikwa bọl ya, nkà dribbling, na ọhụụ. Anyị na-enye ọkwa ya na ala.